Ebook တွေကနေ ဘယ်လို လေ့လာမလဲ?
date_range 30 September 2017
visibility 9240 Views
တစ်နေ့က “ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ် ရေးဆွဲရတာ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ?” လို့ မေးလာတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်အခု လေ့လာဖို့အတွက် စာအုပ်တွေ၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေ ဒေါင်းထားတာ မနည်းဘူး။ အများကြီးပဲ။ ခက်တာက ဘယ်ကနေ စလေ့လာရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတယ်။ များလွန်းတော့ ဘယ်ကစဖတ်ရမှန်းကို မသိတော့တာ။ ဟိုဟာလေး လှန်လိုက်၊ ဒီဟာလေး ဖတ်လိုက်နဲ့ ဘာမှကို သေသေချာချာ မသိသေးဘူး”
ဟု လူငယ်က ပြောလာသည်။
“ငါတို့တုန်းက အဲဒီလို စာအုပ်တွေ အများကြီး မရခဲ့ဘူး။ ရဖို့လည်း မလွယ်ခဲ့ဘူး။ စာအုပ်တစ်အုပ်ရဖို့အတွက် မိတ္တူဆိုင်မှာ သွားကူးရတာ မှတ်မိသေးတယ်။ အင်တာနက်လည်း မရှိတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ ငါတို့အတွက် အကောင်းဆုံး လေ့လာစရာနေရာက Help File တွေပဲ”
လူငယ်လေး ပြောလည်း၊ ပြောလောက်ပေသည်။ ကိုယ်လေ့လာချင်တာ ဘာလဲဆိုတာသာ သိဖို့လိုသည်။ အရင်းအမြစ်တွေက အပုံအပင် တွေ့နိုင်သည်။ ပိုက်ဆံပေးမဝယ်နိုင်လည်း ကိစ္စမရှိပါ။ သူလိုကိုယ်လို လေ့လာနေသူများအတွက် ကိုယ်ချင်းစာတရား ရှေ့ထားပြီး ပညာဖြန့်ဝေနေသော ဘလော့များ၊ ဖိုရမ်များကလည်း တစ်ပုံတစ်ပင်။ တစ်ချို့ ဆိုက်များဆိုလျှင် ကိုယ်လိုချင်သည့် စာအုပ်များကို တစ်နေရာတည်းရအောင် စုထားပေးလိုက်သေးသည်။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်၊ အနှစ်နှစ်ဆယ်ခန့်ကနှင့် ဘာမှမဆိုင်တော့လို့ ဆိုရမည်။ အရင်းအမြစ်တွေက ပေါင်းလန်နေသည်။ လေ့လာလိုသူအတွက် လေ့လာစရာတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ဖြစ်သည်။ သူ အင်တာနက်မှ စုဆောင်းထားသော စာများကို ကျွန်တော့်ကို ပြသည်။ ကွန်ပျူတာ အင်္ဂလိပ်စာ စုံလှသည်။ e-book တွေရော၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေရော၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေ၊ Learning Materials တွေ စုံလှသည်။ ခက်တာက စုတာသာရှိပြီး ဘယ်က စလေ့လာရမှန်း မသိဖြစ်နေသည်။
ကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့ ရှင်းသည်။ စာအုပ်တွေက ရှားမှရှား။ တစ်အုပ်တစ်လေရ အသားကုန်ဖတ်တော့။ နောက်တစ်အုပ်ကရဖို့ မလွယ်။ များပြန်တော့လည်း တစ်မျိုး၊ နည်းပြန်တော့လည်း တစ်မျိုးပါလားဟု စဉ်းစားမိသည်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက် အွန်လိုင်းမှ ပညာသင်ယူနိုင်ပုံကို လူငယ်လေးနှင့် ဆွေးနွေးဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အင်္ဂလိပ်စာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားမည်သည့် အတတ်ပညာကိုမဆို အွန်းလိုင်းမှ သင်ယူတော့မည်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး စုဆောင်းသင့်သည်က e-book များ ဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းသိကြပါသည်။ ဒီနေရာမှာ အဓိက ကွန်ပျူတာ စာအုပ်များအကြောင်းကို အဓိကထား ပြောချင်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာ စာအုပ်များက သူ့နည်းပညာအလိုက် အများအပြားထွက်ကြသည်။ ထုတ်ဝေသူတွေကလည်း မတူကြ။ နည်းပညာ တစ်ခုတည်းအတွက်ပင် စာအုပ်တွေကအများကြီး ထွက်သည်။ ဒါနဲ့ စကားမစပ်ပြောရဦးမည်။ အဲဒီလိုထွက်နေသည့် စာအုပ်များကို ဘာသာပြန်ပြီး ဖတ်မည်ဆိုပါက အဆင်မပြေနိုင်ပါ။
ဒီတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို တိုက်ရိုက် ဖတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့တော့ လိုမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့အတွေ့အကြုံအရ နည်းပညာတစ်ခု ဥပမာ – PHP ဆိုပါစို့။ Amazon မှာ သွားရှာကြည့်ပါ။ သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် e-book တွေ အများကြီး တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကဲ ဒါဆို ဘယ်လိုလေ့လာသင့်သလဲ။
e-book များကို အမျိုးအစား ခွဲခြားမည်ဆိုလျှင် အကျဉ်းအားဖြင့် ခြောက်မျိုးသာတွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ အဲဒါတွေကတော့
Overall View ကို ပေးသော စာအုပ်များ
ပုံများနှင့် တကွရှင်းပြလေ့ရှိသော စာအုပ်များ (Illustrated e-book)
ပြဿနာနှင့် အဖြေကို တွဲပေးထားတတ်သော စာအုပ်များ (Recipes)
Professional တစ်ယောက် ဖြစ်လာစေရန်အထိ ရည်ရွယ်သော စာအုပ်များ
Reference တစ်ခုအနေနဲ့ ထားသုံးနိုင်သော စာအုပ်များ
Real World Project များကို သင်ယူနိုင်သော စာအုပ်များ
Overall View ကို ပေးတဲ့ စာအုပ်တွေကို နမူနာပြပါဆိုရင်တော့ 24 hours တွေကို ညွှန်းရမှာ ဖြစ်သည်။ 24 hours များသည် နည်းပညာတစ်ခုကို အစမှအဆုံးအထိ ခြုံငုံလေ့လာ နိုင်စေရန် စီစဉ်ပေးထားတတ် ကြသည်။ Technology ပိုင်းနှင့် Technique ကို အသာထား။ သူပြောတဲ့အတိုင်း တစ်သွေမတိမ်းဖတ်၊ တစ်သွေမတိမ်း လိုက်လုပ်ယုံဖြင့် ကိုယ်လိုသည့် နည်းပညာကို အားလုံးခြုံငုံပြီး သိသွားနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ပြောချင်ပါသည်။ 24 hours များကို လုပ်တိုင်း အကုန်တတ်ဖို့ မလွယ်ပါ။ တစ်ချို့ သူခိုင်းတာတွေ တစ်သွေမတိမ်း လိုက်လုပ်နိုင်သော်လည်း ဘာကြောင့် အဲဒီလိုလုပ်ရသလဲ ဆိုသော မေးခွန်းကိုတော့ 24 hours တွေက အဖြေမပေးနိုင်ပါ။
24 hours များသည် စတင်လေ့လာမည့်သူများအတွက် ပထမဦးဆုံး အဆင့်ဟု ဆိုနိုင်မည်ထင်သည်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အသစ်တစ်ခုကို လေ့လာတော့မည် ဆိုလျှင် အရင်ဆုံး 24 hours ကို ရှာတတ်သည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံး သေသေချာချာဖတ်၊ သေသေချာချာ လိုက်လုပ်သည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ဆုံးသွားပြီး ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်လေ့လာနေတဲ့ ပညာရပ်က ဘာတွေလုပ်ပေး နိုင်တယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုတို့၊ ဘာကြောင့်တို့ ဆိုတာကိုတော့ 24 hours တွေက မပေးနိုင်။
24 hours ကို လေ့လာပြီးတာနဲ့ ရှေ့ဆက်ပြီး လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်ကတော့ Illustrated e-book တွေနဲ့ Step-by-step e-book တွေပါ။ အခြေခံအဆင့်ကနေစပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမြင့်တဲ့ အဆင့်အထိ သင်ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်ကတော့ Step-by-step ထက် Illustrated တွေကို ပိုသဘောကျသည်။ စာတွေကို ဒီအတိုင်းမရှင်း ပုံများ၊ ဇယားများဖြင့် ရှင်းလင်းပြတတ်သည်။
Illustrated တွေကို လေ့လာရတာ ပျော်စရာ ကောင်းသည်။ 24 hour တုန်းက ရှုပ်လာသမျှ ဒီနေရာမှ ရှင်းတော့သည်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာကြောင့် ဘယ်လိုသုံးသွားသည် စသည်ဖြင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ဆဝါးနိုင်သည်။
အဲဒီလို စာအုပ်မျိုးတွေကိုလည်း တတ်နိုင်လျှင် အစအဆုံး သေသေချာချာ တစ်ခုမကျန် လုပ်ထားသင့်သည်။ ဒါမှ ရှေ့ဆက်တက်လို့ ကောင်းမည်။ Illustrated ကို လေ့လာပြီးပြီး ဆိုလျှင်တော့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ခရီးပေါက်လာပြီဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ် လေ့လာသူဆိုလျှင် သူခိုင်းတာ လိုက်လုပ်နေရတာထက် ကိုယ်က ပြန်ခိုင်းချင်လာတတ်သည်။ အဲဒီအတွက် ပြဿနာတွေ တက်လာသည်။ ဖြေရှင်းစရာတွေ များလာတတ်သည်။ “ဟိုဟာကော မရဘူးလား? ဒီဟာကော လုပ်လို့ မရဘူးလား? ဒီဟာက လုပ်ရတာ ဒီလောက် ရှည်ရလား?” စသည်ဖြင့် သိချင်စိတ်တွေ များလာလိမ့်မည်။
အဲဒီလို လူမျိုးအတွက် စာအုပ်တစ်အုပ်ပေးချင်သည်။ ဟိုဟာချက်ချင် ဒီဟာချက်ချင် ဖြစ်နေသည့် သူအတွက် ဟင်းချက်နည်း စာအုပ်ဟု ဆိုလျှင် မှားအံ့မထင်။ လာပါပြီ Recipes e-book ပြဿနာကဘာ၊ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမည် စသည်ဖြင့် တွေ့ရမည်။ ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းတဲ့ ကျဆိုသလို တစ်သက်လုံး ရေတွင်းထဲက တက်မလာအောင် Recipes တွေကို ဆွဲဆောင် ထားတော့သည်။
ငါလုပ်ချင်နေတာ ဒါပါလားဆိုပြီး ပြဿနာကို ကြည့်လိုက်၊ အဖြေကို စမ်းကြည့်လိုက်နှင့် လွတ် ပျော်စရာကောင်းသည်။ တစ်ခုတော့ ရှိသည်။ ဒီစာအုပ်ကိုတော့ အားလုံး မဖတ်ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်လိုသည့် ပြဿနာရှိမှ အသင့် ဖတ်လိုက်ရုံနှင့် လုံလောက်သည်။
ပြဿနာတွေကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလည်းသိပါပြီ။ ခက်တာက လေ့လာနေရင်း၊ လက်တွေ့စမ်းသပ်နေရင်း လိုအပ်ချက်တွေက ပေါ်လာပြန်သည်။ Recipes က အကန့်အသတ်တွေကို မြင်လာသည်။ ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ Professional e-book တွေ၊ Reference Guide တွေ ဖတ်ဖို့ လိုလာပြီ။
အဲဒီလို Professional တွေ၊ Reference Guide တွေက ကောင်းလွန်းနေသည်။ ကောင်းလွန်းတော့ ခုမှစလေ့လာမည့်သူတွေအတွက် အင်မတန်လေးသည်။ ဒါကြောင့် Over View တွေ၊ How (ဘာကြောင့် လုပ်ရတယ်) ဆိုတာတွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ သိပြီးမှ စသင့်သည်။ Professional တွေ၊ Reference တွေက How တွေ စုပြုံပေးတော့သည်။
ဒီတော့ အဲဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေကို ကိုယ်က အမှန်တကယ် သိချင်မှ ဖတ်တာ ကောင်းသည်။ မဟုတ်လျှင် အင်မတန် ပျင်းဖို့ ကောင်းနိုင်သည်။ ဟန်လုပ်ချင်သည် ဆိုရင်တော့ ဘာမှ မပြောလို။ ခုမှ စလေ့လာသည့် Beginner တစ်ယောက်က Professional စာအုပ်ကို ကိုင်ပါက ဟန်ပြရုံ၊ ခေါင်းခုအိပ်ရုံသာ ဖြစ်နေလိမ့်မည်။
ကဲ … ဒီအဆင့် ရောက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ကိုယ် ပြန်စမ်းသပ်ဖို့သာ ကျန်တော့သည်။ Real World Project တွေ အဓိက ပါဝင်သည့် e-book တွေ ရှာတော့ဟု ပြောရမည် ဖြစ်သည်။ Guided အနေနဲ့ သုံးပြီး Project တစ်ခုလုံးကို အစအဆုံး လုပ်ကြည့်ပါတော့။ ပထမ သူပြောတဲ့ Project တွေကို သေသေချာချာ လုပ်ကြည့်ဖို့ ညွှန်းလိုသည်။
နောက်မှ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးနှင့် ပုံဖော်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခြား Project တွေကို လေ့လာပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပိုင် Project တွေ လေ့လာပါတော့။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိသည်။ လေ့လာခဲ့သည့် အစအဆုံးကို ပြန်ကြည့်မည် ဆိုလျှင် Why ဆိုသော မေးခွန်းကိုတော့ အဖြေမပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ Why ကို သိမှသာ Project တစ်ခုလုံး အစအဆုံး သေသေချာချာ လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် Why ကို ဆက်လေ့လာဖို့ ညွှန်းလိုသည်။
ကိုယ်ရေးနေသည့် Project တွင် အခက်အခဲများ ရှိလာပါက အင်တာနက်ကို ကောင်းကောင်း အသုံးချတတ်ဖို့လိုလာပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အင်တာနက်ဆိုတာ ကိုယ်လိုချင်တာသာ ရှာဖို့ သုံးစေချင်သည်။ သူရှာပေးတာတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုလိုက်ကြည့်ပြီး အချိန်အကုန် မခံသင့်ပေ။ အထူးသဖြင့် Tutorials ဆိုက်များကို လေ့လာသင့်သည်။ အွန်လိုင်းမှာ ပညာရှာပုံကတော့ ပြောစရာ တစ်ပုံတစ်ပင် ရှိသေးသည်။
ကျွန်တော်နှင့် စကားပြော ဖြစ်သော လူငယ်လည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ သဘောကျသွားမည်ဟု ထင်သည်။ သို့ပေမယ့် အပြောလွယ် သလောက် အမှန် တကယ်လေ့လာသည့်အခါ ဘာသာစကား အခက်အခဲ၊ လုံ့လဝီရိယ အားနည်းတာတွေကလည်း ရှိသေးသည်။ စာအုပ်တွေကို အကုန်အစင် မဖတ်နိုင်ပဲ လည်နေတတ်တာလည်း ရှိသေးသည်။
ဒီတော့ "သင် တကယ်ဝါသနာပါသလား၊ တကယ်လေ့လာတော့မှာလား?" ဆိုတာ အရင်မေးသင့်သည်။ "ဒါလေ့လာပြီးရင် ဘာရမှာလဲ?" ဆိုသည့်နေရာတွင် ငွေကြေး၊ လူအထင်ကြီးမှု စသည်ဖြင့် တစ်ခြားဟာတွေ မျှော်လင့် နေလို့ကတော့ ကန်တော့ဆွမ်းဟု ပြောရမည်။
Learner for learning လို့ပဲ ဆိုဆို၊ learning for learner လို့ပဲ ပြောပြော လေ့လာခြင်းအတွက် လေ့လာသူ၊ လေ့လာသူအတွက် လေ့လာခြင်းသာ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက တစ်ခြား လိုအပ်ချက်များနှင့် တန်းညှိနေပြီး၊ ဥပမာ ငွေကြေး ဆိုတာတွေနဲ့ လိုက်ညှိနေပြီး အလုပ်မဖြစ်နိုင်တော့။ တကယ်တော့ နည်းပညာ ခေတ်ကြီးထဲတွင် တစ်သက်လုံး လေ့လာသွားဖို့ လိုသည် မဟုတ်ပါလား။
Self-study လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေသတိထားသင့်လည်း? ဘယ်လိုလုပ်သင့်လည်း?